Shiinaha: Waxaan fahamsanahay ardayda ka soo jeeda dhaqanka Shiinaha iyo | USAHello | USAHello
fahamka ardayda dhaqanka Chinese. Baro Shiinaha iyo ardayda qaxootiga iyo muhaajiriinta.
Sida laga soo xigtay dad badan oo macalimiinta ardayda in ay yihiin asalka dhaqankooda kala duwan baro iyagu ma ay helaan macluumaad ku filan oo ku saabsan ardayda. Haddii aad baro ardayda qaxootiga, waxaa muhiim ah in ay yaqaanaan ka soo jeeda wadanka ku cusub. Xogta hoose ayaa waxaa loogu tala galay in ay bixiyaan muuqaalka guud ee dhibcaha ugu badan ee muhiimka ah, si aad u horumarin karaan xeelado waxbarasho dhaqan ahaan in la jaanqaadaan qaabka waxbarasho ee ardayda u gaar ah.
Standard Chinese ama Mandarin (Official) , Aan hadli Cantonese iyo lahjado kale oo badan oo dalka oo dhan.
Literacy raga iyo haweenka ee Shiinaha ka mid yihiin heerka guud sare, taas oo muujinaysa muhiimadda ay leedahay waxbarashada bulshada Chinese. Tan iyo Revolution dhaqanka Chinese ah (1966-1976) , Qodobada horumarinta nidaamka waxbarashada ee Shiinaha, muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo casriyeynta dhaqaalaha, taasoo keentay in dadaal weyn si loo hagaajiyo nidaamka waxbarashada. laga yaabaa in aad dareento in caruurta Chinese waa ay ka warqabaan muhiimadda ay leedahay waxbarashada.
Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah size ee dalka iyo baaxadda of laga tirada badan yahay qaranka, weli waa waxbarasho kala duwan ee dalka oo dhan iyo ku xirnaan kartaa dhawaanshaha magaalooyinka ama qodobada kale ee la xaddido helitaanka waxbarasho.
About bulshada Chinese, waqtigana, dadaalkaas, ixtiraam, wax caadi ah, gaar ahaan ardayda Chinese. Waa ixtiraam leh in ay sii fadhidaa markii macalinka uu ka hadlaayo. Mabaadiida ixtiraam muhiim ah in dhaqanka Chinese laga arki karaa fasalka.
ka qayb qaadashada qoyska / School
Marka Salaan dadka Chinese, mudnaanta koowaad ee dadka waayeelka ah. Taas macnaheedu waxa weeye in ay tahay edeb inay soo salaamaan qofka weyn ka hor inta aan bogaadinayaa dadka kale. Waxaa kaloo muhiim ah in dadka waaweyn ee Chinese by Mr. ka qaban ,Ms. Miss. Intaa waxaa dheer in ay magaca qoyska, aan magacyadooda ugu horeysay. Haweenka guud ilaaliyaan magacooda at guurka. Waxaan sidoo kale wax ka qabashada dadka Chinese dhex horyaal xirfadeed. Tusaale ahaan, iyadoo la isticmaalayo naaneesta horyaalka Xiang ah: Guddoomiyaha Lee ama Agaasimaha Lee.
rasmiga ah dhaqanka Chinese iyo waxaad ka heli doontaa siyaabo si ay uga hadlaan si ay u muujiyaan. Salaan ragga iyo dumarka ka mid ah gacan qaadka, iyo in wadahadalka uu jiro taabashada yar ama xiriir haddii aad leedahay si aad qof qoyska ah ama ku dhow saaxiibadii. Guud ahaan, ku neceb Chinese taabashada shisheeyayaal. Si kastaba ha ahaatee, ha la yaabin haddii dadka Shiinaha jidh Amskk sida nooc ka mid ah hadal ah oo naxariis.
xiriirka qoyska diiwaan dhaqanka wadajir ah loola jeedaa in qoysaska si dhow ku lug nolosha ardayda Chinese. Waxaa intaa dheer, culeeska la saaray ixtiraamka dadka waayeelka ah waxaa loola jeedaa in ardayda Chinese waalidiinta saameyn noloshooda carruurta. saamayn Tani waxay sidoo kale dhacda walaalaha ka weyn iyo walaalahooda yaryar waxay ka weyn. Sidaa darteed, marka ay la dhibaato ah ardayda wax ka qabashada, waa caqliga leh in ay la hadlaan xubnaha qoyska si ay u fahmaan xaaladda ka khayrbadan ama la raadiyo xal kale oo ku saabsan xal ama fikrado kale. Waxaad ugu horeeyay ee walaalaha ka weyn la hadli kartaa, maxaa yeelay qaab dhismeedka qoyska dhaqanka qoyska Chinese gudahood oo uu leeyahay madaxda a adag, si dhibaatada Barxo ee qoyska dhex mara madaxda dabiiciga ah ka fogaan kartaa dhibaatooyinka.
wada hadalka Chinese waxaa laga yaabaa in aan toos ahayn, waxaana laga yaabaa in u baahan tahay in fasiraan macnaha ka dambeeya erayada. In wadahadalka, qof dhihi kara ka soo horjeeda waxa uu ula jeedo (Waxaa laga yaabaa in ay ka fogaadaan bixinta xadgudub ama sababta oo ah asturnaanta) Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in fiiro gaar ah u tahay in la iyo weydiiso su'aalo si ay u fahmaan macnaha dhabta ah.
Direct indhaha ixtiraam, anshaxa iyo dareenka muujinaysaa, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in la aqoonsado hadalka dhex isgaadhsiin arag. Marka aad la hadasho carruurta waaweyn ama waalidka, qofka cut madaxa waa calaamad kale oo ixtiraam.
Tilmaam A waa in laga fogaadaa marka la ardayda Chinese ama qoyska Chinese qabashada, inay marjic u tahay tilmaanta farta. gacantaadu ama guri XFX Isticmaal gebi halkii tilmaamay fartii farta murdisada. Sidoo kale iska ilaali soo gaaray farta ama Sfirk inay soo jiitaan dareenka qofka. Isticmaal hab mudan ee isgaarsiinta si looga fogaado in mid ka mid ah fikradaha aan mudan.
Shiinaha guud ahaan iska ilaalisaa in wadahadalo ku saabsan siyaasadda, sida dhaleeceyn siyaasadda Chinese ama Revolution dhaqanka. Of hadal yar tallaabada ugu wanaagsan ee edeb wanaagsan.
Dhaqanka, jinsiga iyo qoyska
Waxaa jira heshiis weyn oo xoogga bulshada iyo caadooyinka wadareed, dhaqanka iyo diinta ee nolosha muhiim Chinese ah.
Inta badan dadka Shiinaha dhaqma koox ka mid ah Budiiska, Confucianism iyo Taoism. laga tirada badan yahay A yar oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqankiisa diinta kiristaanka, Protestant, galaya, Mormonism, Islam iyo Yuhuudda. kooxaha Jinsiyada waa Han Shiinaha xukuma, tiro yar oo ah dadka ka mid ah kooxaha kale ee qowmiyadaha, oo ay ku jiraan Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetan, Miao, Manchu, Mongoliyaan, poi, Kuuriyaan.
In la eego madaxda, afkoda rag iyo doorka haweenka iyo fikradaha dhaqan ahaan, halkaas oo bulshada Chinese weli lab xukuma, laakiin maxaa yeelay haweenku waxay noqdeen bulshada more siman, views haweenka ee xuubsiiban. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo saamiga haweenka ee ciidanka shaqada u korayo, waxaa weli la filayaa in dumarka dhali masuuliyada qoyska.
Ragga iyo dumarka u muuqdaan in ay xirtaan dharka rasmiga ah iyo kuwa muxaafidka ah, dhar midabka madow iyo dhar aan Muujin.
khayraadka dheeraad ah
guide dhaqanka Chinese
Ma rabtaa in aad in badan ka ogaataan sida ay dadka ajnabiga ah iyo ardayda qaxootiga taageero bartaan? Subscribe to koorsada horumarinta xirfada macalimiinta.
Print macluumaadkan sida file PDF ah
Waxaad awoodi kartaa Download asalka ardayga Chinese iyo daabac qeexitaanka sida file PDF ah Oo waa inay dhawraan oo khayraad ah ee fasalka.